JUNE&MAY: မေ (မှတ်တိုင် ၃)
Posted by JuneOne at 6:44 AM
Happy Birthday, May! Wishing you happiness, good health and all the best in your life ...
Thandar Lwin May 13, 2013 at 8:38 AM
ချစ်ရတဲ့ မေလင်းလင်း လေး
Happy Birthday Thameelay May!
maynyeinchan May 13, 2013 at 10:39 AM
ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေ။နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာထိ ဖေ၊မေ၊ကို တို့နဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်၊ချမ်းချမ်းသာသာ နေနိုင်ပါစေ လို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
ပါပါး..မားမား ကိုကိုး တို့နဲ့ နှစ်ပေါင်း များစွာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ...သမီးလေး...
Happy birthday may, love you <3
မိုးမိုး May 15, 2013 at 5:42 PM
သမီးလေး မေလင်းလင်း ရဲ့ ပျော်စရာ မွေးနေ့ပေါင်း များစွာကို စိတ်ချမ်းသာ၊ ကိုယ်ကျမ်းမာနဲ့ ချစ်သော မိသားစုနဲ့ အတူတကွ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ